'DesktopChat maka Whatsapp' dị maka OS X | Esi m mac
'DesktọpụChat maka WhatsApp' Ọ bụ ngwa maka oS X, nke ga - enye gị ohere iji WhatsApp ozugbo na Mac gị. Ngwa a adịbeghị anya wee pụta na Mac App Store na Disemba 9. Ngwa dị n'asụsụ Bekee, mana nke kachasị, ọ bụ n'efu. N'ụzọ ezi uche dị na ya ọ bụghị akwụkwọ gọọmentị WhatsApp, mana ngwa nke atọ. 'DesktopChat for Whatsapp' nbudata ya bụ n'efu, mana n'ime ngwa ahụ naanị ị nwere ike iji ya n'efu naanị ụbọchị iri atọ.
Ọ bụ ihe ọzọ iji WhatsApp na Mac gị, ọ bụ ezie na ọ naghị akwado ugbu a izipu ndetu olu. Ọ bụrụ na ị si Whatsapp Ma ọ bụghị site telegram nke a bụ ezigbo ngwa gị. M na-ekwu ọzọ, na ọ bụ ezie na ngwa ahụ bụ n'efu, ọ nwere naanị otu 30 ụbọchị ngosi ngosi, gịnị ma ọ bụrụ na-amasị gị mgbe e mesịrị ị pụrụ ịzụta maka mgbe ebighị ebi ojiji.
Jiri 'DesktopChat maka WhatsApp'na desktọọpụ gị ebe ọ gụnyere atụmatụ ndị a:
Ofụri Esịt dakọtara na Yosemite y El Capitan.
WhatsApp zuru ezu na nnweta ozugbo na desktọọpụ.
Bugote foto ma zipụ ha na kọntaktị gị.
Nwere ike ka ibudata faịlụ zitere ozugbo na desktọọpụ gị.
Nkwado zuru ezu iji Emojis.
Ịma ọkwa ọhụụ.
Nwere ike hazie akara ngosi.
Ma ọ nwere nkwado nke ihuenyo zuru oke.
Nkọwa nke 'DesktopChat maka WhatsApp'::
Ahịa: Free (ụbọchị ikpe 30).
Download 'DesktọpụChat maka WhatsApp' kpam kpam site na Mac App Store, site na njikọ ndị a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Mmemme Mac » Mac App Store » 'DesktopChat maka Whatsapp' dị maka OS X
Ọ bụ ezigbo COPY nke ChitChat, ọ bụ otu nnomi ...
Onye nrụpụta nke a ekwesighi ịbudata ngwa ya ma kwụọ ụgwọ ya.
Chitchat bụ n'efu na n'efu.
Ikwuru eziokwu, ọ bụ otu ChitCchat.
ọ bụ ụdị weebụ nke whatsapp ka ha wee dị ka nnomi… ọ ka mma iji na-eji ihe nchọgharị weebụ.
Zaghachi Leon Villa
Foto Collage Mee Pro n'efu maka obere oge
Taylor Swift's "1989 World Tour LIVE" Kwepụtara Naanị maka Apple Music